22 Mar 2018 . 12:31 PM
နေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘဝကြီးကို စိတ်ကုန်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အလှတရားတွေကို ရှာဖွေဖို့အချိန်တန်နေပြီနော်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သစ်ပင်လေးတွေ၊ လိပ်ပြာလေးတွေ၊ ပန်းပွင့်လေးတွေ၊ တောင်တန်းတွေ အစရှိသဖြင့် အလှတရားတွေ များစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီအလှတရားတွေတစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပြီး နိဗ္ဗာန်ဘုံလားလို့တောင် ထင်မှားရလောက်အောင် လှလွန်းတဲ့ ကမ်းခြေ ၅ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီကမ်းခြေ ၅ခုကို ကိုယ့်ရဲ့ လူ့သက်တမ်းမကုန်ခင် သွားဖြစ်အောင်သွားသင့်ပါတယ်။
၁။ Lindquist Beach. St. Thomas
Source : https://www.cntraveler.com
နံပါတ် ၅ နေရာမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ Lindquist Beach က Smith Bay Road မှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြာလဲ့လဲ့ပင်လယ်ရေအရောင်နဲ့ ဖွေးဥနေတဲ့သဲသောင်တွေက တကယ်ကို မှင်သက်စေတာပါ။ ပင်လယ်တစ်ဝိုက် ဝန်းရံထားတဲ့ တောင်တန်းတွေကစိမ်းစိုနေပြီး တကယ့်ကို ပန်းချီကားတစ်ချပ်အလား လှလွန်းနေပါတယ်။ ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးဟာ တိတ်ဆိတ်လွန်းလှပြီး ပင်လယ်ရေဟာကြည်လွန်းတဲ့အတွက် အပြည့်အဝအနားယူလို့လည်း ရပါတယ်။ တည်းခိုဖို့အတွက် Hotel ဒီ Link မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
၂။ Orient Bay Beach. St.Martin
နံပါတ် ၄ မှာ ရပ်တည်နေတာကတော့ ကမ်းခြေမှာ အနားယူအပန်းဖြေတာအပြင် ပျော်လို့ကဲလို့လည်းရနိင်တဲ့ Orient Bay Beach ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဥနေတဲ့ သဲသောင်ပြင်နဲ့ ကြည်ပြီး စိမ်းပြာရောင် သန်းနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးအပြင် ကဲလို့ရနိုင်အောင် Bar တွေနဲ့ DJ တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Orient Bay Beach ကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် လေဆိပ်ကနေ ၂မိနစ်ခန့်သာ ကြာပါတယ်။ တည်းခိုဖို့အတွက် ဒီ Hotel တွေရှိပါတယ်။
၃။ El Nido, Palawan, Philippines
El Nido ကတော့ နံပါတ် ၃ နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ စိမ်းညိုညို အပင်တွေနဲ့ ကြီးမားပြီး ထုထည်အပြည့်နဲ့ ပင်လယ်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ တောင်တန်းတွေနဲ့ ကျောက်စိမ်းအလား စိမ်းပြီး ကြည်နေတဲ့ပင်လယ်ရေက အသက်ရှူမှားလောက်စေပါတယ်။ Scuba Diving လုပ်လို့အကောင်းဆုံး ပင်လယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ El Nido မှာ တည်းလို့ရနိုင်တဲ့ Resorts တွေကတော့ ဒီ Link မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၄။ Sunset Beach. Oahu, Hawaii
နေထွက်ချိန်ထက် နေဝင်ချိန်က အလှဆုံးပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါ။ နေဝင်ချိန်မှာ တောင်တန်းတွေ၊ ပင်လယ်တွေနဲ့ သဲသောင်တွေ ဝန်းရံထားရင် ပိုပြီး ပြီးပြည့်စုံပြီး လစ်ဟာမှုမရှိတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်မသွားပေဘူးလား။ ဒီလိုပန်းချီကားကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ မြင်ချင်ရင်တော့ Hawaii မှာ ရှိတဲ့ Sunset Beach ကိုသွားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံးသာ Sunset Beach မှာ စောက်ချနေချင်စိတ်တွေပါဖြစ်စေလောက်အောင် လှလွန်းနေပါတယ်။ တည်းခိုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Hotel ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link မှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
၅။ Honokalani Beach, Wai’anapanapa State Park, Maui, Hawaii
သဲသောင်လေးတွေကို အမည်းရောင်လေးတွေနဲ့ မြင်ဖူးလား။ ရှိတယ်လို့ရော ထင်မိလား။ Black Sand ဆိုတာ တစ်ကယ်ရှိပါတယ်။ Hawaii မှာတည်ရှိနေတဲံ Honokalani Beach မှာ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အမည်းရောင် သဲသောင်နဲ့ ကျောက်စိမ်းရောင်သန်းနေတဲ့ပင်လယ်ကြီးနှစ်ခု ပေါင်းစပ်မှုက Honokalani Beach ကိုလာရောက်အပန်းဖြေကြတဲ့ သူတွေအတွက် အိပ်မက်အလား နိဗ္ဗာန်အလား ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်စေပါတယ်။ သွားရောက်လည်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Hotel မှာ Booking လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နစေ့ဉျလှုပျရှားနရေတဲ့ ဘဝကွီးကို စိတျကုနျနပွေီလား။ ဒါဆိုရငျတော့ အလှတရားတှကေို ရှာဖှဖေို့အခြိနျတနျနပွေီနျော။ ကမ်ဘာပျေါမှာ အလှတရားတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ သဈပငျလေးတှေ၊ လိပျပွာလေးတှေ၊ ပနျးပှငျ့လေးတှေ၊ တောငျတနျးတှေ အစရှိသဖွငျ့ အလှတရားတှေ မြားစှာရှိပါတယျ။ အဲဒီအလှတရားတှတေဈနရောတညျးမှာ စုစညျးပွီး နိဗ်ဗာနျဘုံလားလို့တောငျ ထငျမှားရလောကျအောငျ လှလှနျးတဲ့ ကမျးခွေ ၅ ခုရှိပါတယျ။ အဲဒီကမျးခွေ ၅ခုကို ကိုယျ့ရဲ့ လူ့သကျတမျးမကုနျခငျ သှားဖွဈအောငျသှားသငျ့ပါတယျ။
နံပါတျ ၅ နရောမှာ ရပျတညျနတေဲ့ Lindquist Beach က Smith Bay Road မှာ တညျရှိနတောဖွဈပါတယျ။ ပွာလဲ့လဲ့ပငျလယျရအေရောငျနဲ့ ဖှေးဥနတေဲ့သဲသောငျတှကေ တကယျကို မှငျသကျစတောပါ။ ပငျလယျတဈဝိုကျ ဝနျးရံထားတဲ့ တောငျတနျးတှကေစိမျးစိုနပွေီး တကယျ့ကို ပနျးခြီကားတဈခပျြအလား လှလှနျးနပေါတယျ။ ကမျးခွတေဈခုလုံးဟာ တိတျဆိတျလှနျးလှပွီး ပငျလယျရဟောကွညျလှနျးတဲ့အတှကျ အပွညျ့အဝအနားယူလို့လညျး ရပါတယျ။ တညျးခိုဖို့အတှကျ Hotel ဒီ Link မှာကွညျ့နိုငျပါတယျနျော။
နံပါတျ ၄ မှာ ရပျတညျနတောကတော့ ကမျးခွမှော အနားယူအပနျးဖွတောအပွငျ ပြျောလို့ကဲလို့လညျးရနိငျတဲ့ Orient Bay Beach ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဥနတေဲ့ သဲသောငျပွငျနဲ့ ကွညျပွီး စိမျးပွာရောငျ သနျးနတေဲ့ပငျလယျပွငျကွီးအပွငျ ကဲလို့ရနိုငျအောငျ Bar တှနေဲ့ DJ တှရေဲ့ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတောဖွဈပါတယျ။ Orient Bay Beach ကို ရောကျရှိဖို့အတှကျ လဆေိပျကနေ ၂မိနဈခနျ့သာ ကွာပါတယျ။ တညျးခိုဖို့အတှကျ ဒီ Hotel တှရှေိပါတယျ။
El Nido ကတော့ နံပါတျ ၃ နရောမှာရပျတညျနပေါတယျ။ စိမျးညိုညို အပငျတှနေဲ့ ကွီးမားပွီး ထုထညျအပွညျ့နဲ့ ပငျလယျမှာ ရပျတညျနတေဲ့ တောငျတနျးတှနေဲ့ ကြောကျစိမျးအလား စိမျးပွီး ကွညျနတေဲ့ပငျလယျရကေ အသကျရှူမှားလောကျစပေါတယျ။ Scuba Diving လုပျလို့အကောငျးဆုံး ပငျလယျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ El Nido မှာ တညျးလို့ရနိုငျတဲ့ Resorts တှကေတော့ ဒီ Link မှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
နထှေကျခြိနျထကျ နဝေငျခြိနျက အလှဆုံးပနျးခြီကားတဈခပျြပါ။ နဝေငျခြိနျမှာ တောငျတနျးတှေ၊ ပငျလယျတှနေဲ့ သဲသောငျတှေ ဝနျးရံထားရငျ ပိုပွီး ပွီးပွညျ့စုံပွီး လဈဟာမှုမရှိတဲ့ ပနျးခြီကားတဈခပျြဖွဈမသှားပဘေူးလား။ ဒီလိုပနျးခြီကားကို မကျြမွငျကိုယျတှေ့ မွငျခငျြရငျတော့ Hawaii မှာ ရှိတဲ့ Sunset Beach ကိုသှားဖို့တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ တဈသကျလုံးသာ Sunset Beach မှာ စောကျခနြခေငျြစိတျတှပေါဖွဈစလေောကျအောငျ လှလှနျးနပေါတယျ။ တညျးခိုဖို့အတှကျဆိုရငျတော့ Hotel ရှေးခယျြမယျဆိုရငျတော့ ဒီ Link မှာ ဝငျကွညျ့နိုငျပါတယျနျော။
သဲသောငျလေးတှကေို အမညျးရောငျလေးတှနေဲ့ မွငျဖူးလား။ ရှိတယျလို့ရော ထငျမိလား။ Black Sand ဆိုတာ တဈကယျရှိပါတယျ။ Hawaii မှာတညျရှိနတေဲံ Honokalani Beach မှာ တှရေ့နိုငျပါတယျ။ အမညျးရောငျ သဲသောငျနဲ့ ကြောကျစိမျးရောငျသနျးနတေဲ့ပငျလယျကွီးနှဈခု ပေါငျးစပျမှုက Honokalani Beach ကိုလာရောကျအပနျးဖွကွေတဲ့ သူတှအေတှကျ အိပျမကျအလား နိဗ်ဗာနျအလား ထငျရောငျထငျမှားဖွဈစပေါတယျ။ သှားရောကျလညျပတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီ Hotel မှာ Booking လုပျနိုငျပါတယျ။